News - Sidee loo doortaa barafuunka shukaansiga?
Dhalo Cadar Glass
Dhalo Polish ciddiyaha
Dhalo Tube-Dhalo ah
Dhalada Saliida ee loo yaqaan 'Essentail Oil'
Dhalo caag ah
Koofiyad Dhalo Cadar ah
Koofiyad Dhalo Polish Ciddiyaha & Burushka
Tube Lipstick & Lip Gloss Tube
Sidee loo doortaa barafuunka shukaansiga?
Inta lagu jiro taariikhda, ha ahaato mid xirfadeed ama mid shaqsiyeed, waxaa muhiim ah in laga tarjumo sawir dhab ah, iyadoo la raacayo jiritaankaaga dhabta ah. Haddii si wanaagsan loo xushay, cadarkaaga ayaa ka jawaabi doona shakhsiyaddaada, wuxuuna ku reebi karaa raad reeb taariikhdaada ah, kaasoo aan ku xusuusan doonin adiga oo keliya, laakiin sidoo kale ku xusuusan doona aqoonsigaaga ufuran.
Doorashada cadar waa xulashada dareenkaaga urta. Waxay muujin kartaa waxyaabo badan oo naftaada ku saabsan. Markaad shukaansato, waa inaad doorataa barafuun ku habboon shakhsiyaddaada oo kaa dhigaysa mid kalsooni qaba.
Halkan waxaa ku yaal xoogaa talo soo jeedin ah oo ku saabsan doorashada barafuunka ugu habboon ee shukaansi.
1. Dooro cadar ka tarjumaya sawirkaaga runta ah.
Cadar, haddii si sax ah loo doorto, waxay ka dhawaajin doontaa shakhsiyaddaada. Taariikhdaadu kuma xusi doonto oo keliya. Iyo astaamahaaga urta. Marka dooro cadar ka tarjumeysa naftaada runta ah.
2. Dooro cadar ku siinaya shucuur xoog leh.
Cadar ka tarjumeysa naftaada runta ah waa cadar ku siineysa dareenno xoog leh oo qumman.
Cadar udgoon oo qofka ku riyaaqi kara waxay sare u qaadi kartaa isku kalsoonaanta, taas oo ah xoogga ugu fiican ee jirrabka.
3. Wax ka baro dhaxalkaaga udgoon.
Nooca nooca cadarka ah ee ay kuu keeni karto waxay kuxirantahay dareenkaaga urta dhaxalka. Hidahaaga udgoon ayaa laga sameeyay da 'aad u da' yar, oo matalaya dhamaan urta, urta iyo dhadhanka aad ka dareento noloshaada, kuna xiran xusuusta wacan. Tusaale ahaan, waxay ku xasuusin kartaa jacaylka aad u qabto awoowe ku jecel oo ku geeya beertiisa si aad u goyso cawska ama aad u soo goosato khudradda. Xaaladdan oo kale, urta cagaaran waxay u eg tahay inay tahay urkaaga aad ugu jeceshahay.
4. Isku day cadarkaaga taariikhda ka hor.
Sidaas darteed waa muhiim inaad waqti siiso inaad sifiican u tijaabiso cadarkaaga taariikh kahor. Tusaale ahaan waad isku dayi kartaa labo ama seddex nooc oo kala udgoon ah oo maqaarkaaga ah, wax yarna waad socon kartaa ka hor intaadan go'aan gaarin. Sidoo kale, xusuusnow inaad weyddiisatid shaybaarro, si cadarka loo soo bandhigo habeenkii. Haddii ay ku siiso dareen wacan subaxa dambe, oo aad hesho bogaadin, waxay u badan tahay inay ka dhigan tahay in udgoonku adiga kugu habboon yahay.
Hadda oo aad heshay barafuun ka turjumi kara qofka dhabta ah, ku siin kara kalsooni oo ku siin kara dareenno xoog leh oo togan, waxaa muhiim ah in aad tijaabiso cadarkaas saacado badan maqaarka ka hor taariikhda. Xusuusnow, cadarku wuxuu soo saari doonaa alchemy gaar ah maqaarkaaga, sidaa darteed waa wax aan macquul aheyn in horay loo sii saadaaliyo sida cadarku isu rogi doono.
Markaad raacdo talaabooyinkan, cadarka aad dooratay wuxuu noqonayaa saaxiibkaaga ugu fiican ee shukaansi.
Maamulaha iibka waaxda caalamiga: Jerry Ju